Jirama-CUA: nosantarina teny III G Hangar ny « Famatsian-jiro mora » - ewa.mg
Jirama-CUA: nosantarina teny III G Hangar ny « Famatsian-jiro mora »
News - Jirama-CUA: nosantarina teny III G Hangar ny « Famatsian-jiro mora »
Nidina teny amin’ny
fokontany III G Hangar Antohomadinika ny Jirama sy ny
kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ny 9 jona
teo. Nisolo tena ny CUA ny sampana
mpamonjy voina CUA.
Nentanin’ny Jirama sy
ny kaominina CUA ny tokantrano sahirana hampiditra jiro
amin’ny alalan’ilay tetikasa fampidiran-jiro mora na
« branchement mora ». Tanjona ny hisarihana mpanjifa
vaovao mba hisorohana ny trano may vokatry ny herinaratra.
Maherin’ny 10 ny tokantrano nanaiky avy hatrany hampidiran-jiro.
Vina ato ho ato sady lavitr’ezaka ny hampidiran-jiro ny tokantrano
marefo rehetra eny amin’ny III G Hangar. Nanentana nanoro lalana ny
mponina amin’ny fiatrehana sy ny tokony hatao raha sendra misy
haintrano ny mpamonjy voina. Nomena azy ireo koa ny laharana
antsoina raha sendra misy ny voina.
Andrianariseheno, lehiben’ny tetikasa Branchement Mora, fa
zava-dehibe ity fanentanana iombonana mba hahafahan’ny
isan-tokantrano mahazo antoka ny herinaratry ny Jirama azony.
Anisan’ny veliranon’ny filoham-pirenena rahateo ny fahazoana
herinaratra mora vidy.
Trano hazo ny
Ho an’ny kapiteny Ralimbison Yves
Helory, tompon’andraikitry ny seraseran’ny mpamonjy voina, “tsy
maintsy apetraka ny tena fanabeazana ho an’ny mpanjifa herinaratra,
mahatonga anay hiaraka amin’ny Jirama”. Tsiahivina fa trano hazo ny
ankamaroan’ny trano ao amin’ity fokontany ity.
Notsorin’i Sitraka, mponina eny
an-toerana, anisan’ny nahazo voalohany ny fampidiran-jiro mora, fa
nampiasa labozia izy ireo hatramin’izay. Mila nitandrina be amin’ny
fampiasana azy satria tsy ampy ny vola. “Tsy afaka niana-desona ny
zanako amin’ny alina satria tsitsiana ny labozia. Milamina ny
tokantranonay izao satria nahazo herinaratra mora”, hoy ihany
Miisa 30.000 ny tokatrano
hampidiran-jiro mora hatramin’ny taona 2023.
L’article Jirama-CUA: nosantarina teny III G Hangar ny « Famatsian-jiro mora » a été récupéré chez Newsmada.
Singa navoakan’ny IPC: Be kolikoly indrindra maneran-tany i Madagasikara
Anisan’ny firenena 50 be kolikoly indrindra maneran-tany i Madagasikara, laharana faha-149 amin’ireo firenena 180 nalahatra tamin’ny 2020 momba ny IPC*. 2,5/10 ihany ny isa nomena an’i Madagasikara. Na izany aza, nisy fiovana kely ihany ny toeran’i Madagasikara.Raha amin’io laharana io, nahavita ezaka kely ihany i Madagasikara, indrindra fa momba ny lalàna hiadiana amin’ireo harena azo tsy tsy ara-dalàna, fanendrena olona eo anivon’ny CSI* sy ny Bianco. Nisy ireo olona nosamborina tompon’antoka tamin’izany kolikoly izany, ary nohelohin’ny PAC* .Eo am-pijerena izany ady amin’ny kolikoly izany, nilaza ny CSI fa mila homen-danaja ny ezaka atao eto amin’ny firenena . Tokony henjehina, noho izany, hoy ny CSI ireo harena tsy azo antoka sy fampiharana ny lalàna mifandraika amin’ny PAC sy ny fomba fitantanana amina sehatra sivy : fitsarana, fiarovana, asam-panjakana, tetibolam-panjakana, harena voajanahary, fitsinjaram-pahefana, fahasalamana, fanabeazana sy sehatra tsy miankina. Mitaky ezaka fanatsarana ny fitantanana amin’ireo rehetra ireo, an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra.R.MathieuCSI* : Comité pour la Sauvegarde de l’IntégritéIPC * : Indice de Perception à la CorruptionPAC* : Pôle Anti-corruptionL’article Singa navoakan’ny IPC: Be kolikoly indrindra maneran-tany i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
FAMPIRANTIANA AN-TSARY :: Hitohy amin’ny famelabelarana ny fampahafantarana ny Akamasoa
Fiarahan’ny lahatsoratra sy ny saripika. Niainga avy amin’ilay boky « La cité d’espérance de Père Pedro», ary vao navoakan’ny trano mpanonta boky Rocher vao haingana. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ary haharitra hatramin’ ny 22 desambra izao ny fampirantiana saripika hitantarana ny zava-misy iainana eny amin’ny Akamasoa, tanàna natsangan’ i Père Pedro hitsinjovana ireo fianakaviana sahirana. Araka ny fandaminana efa napetraka,dia tokony hisy ny fihaonana amin’ny mpanoratra Pierre Lunel, omaly maraina, hitantarany ny fomba fanorany rehefa mitantara olona toa an-dry Père Pedro. Noho ny antony manokana anefa dia nofoanana izany tamin’ny ora farany. Fandaharam-potoana manaraka kosa ny famelabelarana momba ny « Akamasoa » hiarahana amin’izy telo mianaka, toko telo nahamasa-nahandro, dia i Père Pedro, Pierre Lunel ary i Rijasolo, hotontosaina ny 11 desambra izao ao amin’ny IFM ihany. Rakotra saripika niangalian’i Rijasolo, ary ahitana ny asa soratr’ilay mpanoratra frantsay Pierre Lunel, nanoratra ny « La cité d’espérance de Père Pedro». Hita taratra ao anatin’ireo saripika ireo ny fiainan’ireo mponina ao Akamasoa. Tanàna izay nahitana taratra ny fandraisana amin’ny maha olona, ny fametrahana ny firahalahiana ary ny fifanampiana eo amin’ny samy mpiara-monina. Nandritra ny lanonana fanokafana ny fampirantiana ny alatsinainy teo ihany koa no nampahafantarana io boky io. L’article FAMPIRANTIANA AN-TSARY :: Hitohy amin’ny famelabelarana ny fampahafantarana ny Akamasoa est apparu en premier sur AoRaha.
Olona valo maty teny ambony sambo…: tratra i Maria, nitatitra antsokosoko olona nihazo an’i Mayotte
Ramatoa mpanondrana tsy ara-dalàna olona izay niteraka fahafatesana valo mianadahy no tra-tehaky ny zandary tao amin’ny fokontany Jabala, kaominina Nosy Be, afakomaly…Saron’ny zandary, ny 12 mey 2021 hariva, teo amin’ny “pont Joby”, fokontany Jabala, kaominina Nosy Be, Rasoanahinatiana Francia Maria, antsoina hoe i Maria, tompon’antoka amin’ny fandefasana antsokosoko olona nihazo ny Nosy Mayotte, ny 18 oktobra 2020, ka nahafatesana olona miisa valo teny ambony sambo tamin’ireo 21 nentiny. Tsiahivina fa namoahan’ny zandary ao amin’ny borigadin’i Dzamandjar Nosy Be didy fikarohana izy, nanomboka ny 11 novambra 2020, fotoana farany nahitana azy, saingy izao izy vao tratra taorian’ny paikady manokana napetraky ny zandary ao an-toerana. Namoy ny ainy teny ambony sambo noho ny hanoanana sy hetaheta ireto mpandeha ireto. Telo herinandro taty aoriana, natsingevan’ny ranomasina ireto mpitsoa-ponenana ireto noho ny fahasimbana tao amin’ny moteran’ilay sambo ka tsy tonga tany Mayotte. Isan’ireo namoy ny ainy tamin’izany ny vehivavy iray nitondra vohoka, ny zazakely roa ary ny mpanamorin’ilay sambo sy ny ankizivavy iray nanaovana ombay mitady tany Antsiranana, isan’ireo mpandeha tamin’ity sambo ity. Sambo mpanjono ny nahita ilay sambo maty motera sy ireto olona 13 sisa velona ireto ka nanavotra azy ireo izay efa reraka tanteraka. Natsipin’ireo mpandeha any anaty ranomasina kosa ireo mpandeha naman’izy ireo namoy ny ainy. Nanao ny fikarohana avy hatrany ny niafara amin’ny fahatrarana an’i Maria. Nilaza izy nandritra ny famotoran’ny zandary fa nakany saran-dalana 2 400 000 Ar ka hatramin’ny 3 tapitrisa Ar isan’olona ireto mpandeha ireto. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny zandary. Manahy sahady ny fianakavian’ireo niharam-boina fa ho very an-javony ny tohin’ity raharaha ity. Na eo aza anefa izany, mangataka fiaraha-miasa amin’ny vahoaka ny zandary mba hampita vaovao haingana raha misy tranga mampiahiahy.J.CL’article Olona valo maty teny ambony sambo…: tratra i Maria, nitatitra antsokosoko olona nihazo an’i Mayotte a été récupéré chez Newsmada.
Kaominina efatra any Menabe: voavolavola ny drafitra fanajariana ny tany
Notanterahina, ny herinandro teo tao Morondava, ny fanaovan-tsonia fifanarahana fiaraha-miasa ho amin’ny famolavolana Drafitra ifoton’ny fanajariana ny tany ho an’ireo kaominina efatra ao anatin’ny faritra voaaro Menabe Antimena (Aire protégée Menabe Antimena – APMA). Anisan’ny hisitraka izany ny kaominina Delta, i Tsimafana, i Beroboka Avaratra ao amin’ny distrika Belo ambonin’i Tsiribihina sy kaominina Marofandia ao amin’ny distrika Morondava. Fitaovana ahafahana mamoaka ireo vinam-pampandrosoana eny anivon’ny kaominina ny DIFT (Sac), ary mandrindra ny fampiasana ny tany sy ny faritra rehetra eo amin’ny kaominina. Nanao sonia izany ny Fitantanana foiben’ny fanajariana ny tany eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny fitantanana foiben’ny fitantanana ny tontolo iainana (DGGE) eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny faritra Menabe, ireo kaominina efatra, ny fikambanana Fanamby mpitantana ny APMA, Pact Madagascar mpitarika ny Consortium USAID Hay Tao, ary ny Sehatra iombonan’ny fanànan-tany (Sif). Nialohavana fampiofanana ireo tompon’andrikitra avy amin’ireo kaominina efatra hisitraka ity Drafitra ifoton’ny fanajariana ny tany ity izao fanaovan-tsonia izao.Synèse R. L’article Kaominina efatra any Menabe: voavolavola ny drafitra fanajariana ny tany a été récupéré chez Newsmada.
Fananan-tany :: Esorin’ny kaominina eny Anosimpatrana ny MBS
Mamerina ny fananany any amin’ireo nampiasana izany ny kaominina Antananarivo renivohitra. Voakasika ao anatin’izao hetsika izao ny tany eny Anosimpatrana, izay nampiasain’ny vondrona MBS efa ho taona maro izao. « Manome enim-bolana hialanareo eo amin’ny tanin’ ny kaominina Antananarivo renivohitra izahay », hoy ny ampahany amin’ny taratasy fampahafantarana nosoniavin’Andriantsitohaina Naina, Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra ary nalefa teny amin’ ny orinasan-tserasera MBS eny Anosimpatrana, omaly. Fifanaraham-panofana tany, tamin’ny 8 aogositra 2000, ity kasain’ny kaominina hofoanana ity. Namaly avy hatrany an’izao fikasan’ny kaominina Antananarivo renivohitra izao ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc, tompon’ny orinasa MBS. « Miantso ny Ben’ny tanànan’Antananarivo mba handinika tsara ny fifanarahana teo amin’ ny MBS sy ny kaominina Antananarivo aloha aho, izay vao handray fepetra toy izao », hoy izy nanoloana ny mpanao gazety, omaly. Tsy maintsy hiala eny Anosimpatrana, noho izany, ity haino aman-jery ity aorian’ny enim-bolana, nanomboka tamin’ny 30 jolay lasa teo, fotoana nivoahan’ny taratasy fampahafantarana avy amin’ ny kaominina. L’article Fananan-tany :: Esorin’ny kaominina eny Anosimpatrana ny MBS est apparu en premier sur AoRaha.
Betroka : Dahalo dimy azo sambo-belona niaraka tamin’ny omby 4
Noho ny fanomezam-baovao marim-pototra avy tamin’ny olona tsara sitrapo ny mpitandro filaminana, ka tao anatin’ny fanarahan-dia niarahan’ny Fokonolona sy ny Zandary, dia voasambotra tao Ilakaka ny dahalo dimy sy omby efatra tamin’ireo very tany amin’ny Kaominina Andriadapy, Distrikan’i Betroka, ny 20 Jona lasa teo. Raha ny vaovao voaray, efa niaraka tamin’ny kavina vaovao sy taratasy famotsiana omby halatra ny telo tamin’ireo omby. Nisy avy hatrany moa ny fanadihadiana lalina nataon’ny Zandary amin’ny ady atao amin’ny famotsiana omby izao, ka misy patiraon’omby sy mpanao ny taratasin’omby (dahalo ambony latabatra) no voasaringotra ao anatin’ity raharaha famotsian’omby ity. Eric ManitrisaL’article Betroka : Dahalo dimy azo sambo-belona niaraka tamin’ny omby 4 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Minisitry ny Mponina, i Bavy Angelica: “Isaorana ireo manampy ny havana any atsimo »
Mijoro ho mpamaha olana ny fitondrana foibe sy ny minisiteran’ny Mponina, indrindra amin’ny fanohanana ny any atsimo. Maro ireo nandray andraikitra amin’ny fanampiana azy ireo any. Anisany ny minisiteran’ny Mponina sy ireo fikambanana na ny ONG sy ireo olon-tsotra tsy ankanavaka nifanome tanana. “Isaorana amin’ny fijerena ny maha olona sy ny fijerena ny soa ho an’ny mpiara-belona”, hoy ny minisitra Bavy Angelica. Nanteriny fa manao ny ezaka rehetra hoentina hanampiana ireo mponina any atsimo ny minisitera. Manana drafitra maty paika ho amin’ny fohy ezaka sy lavitra ezaka. Efa nidina ifotony nitondra fanampiana sy nampahery ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo ny minisitra. Nambarany fa hatsangana ny ivontoerana ho an’ireo zaza, tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo, raisina an-tanana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalam-bahoaka. Hanomboka ny herinandro ho avy io koa ny hetsika “Kaly tsinjo”, iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Anisan’ny hisitraka izany koa ireo distrika tena voakasika manokana tamin’ny valanaretina Covid-19.Etsy andaniny, nankasitraka ny fandraisan’andraikitry ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy, manoloana ny firongatry ny herisetra, nahazo vahana tato ho ato. “Fiadiana sy fiarovana ny azon’ny ankizy no imasoany. Fiarovana ireo voan’ny herisetra”, hoy ihany izy.Synèse R. L’article Minisitry ny Mponina, i Bavy Angelica: “Isaorana ireo manampy ny havana any atsimo » a été récupéré chez Newsmada.
Tatitry ny asan’ny governemanta: hifanatrika amin’ny « visioconférence » ireo depiote sy ny PM
Hanao tohivakana ato anatin’ny herinandro. Hanomboka, anio, ny fifanatrehana ampitain-davitra eo amin’ny depiote sy ny mpikamban’ny governemanta. Hisantatra izany ny Praiminisitra, i Ntsay Christian, hanao tatitra ny asa vitan’ny mpanatanteraka. Hanohy izany, avy eo, ny minisitry ny Toekarena, Randriamandrato Richard. Ary ny tolakandro, anjaran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ary ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny fikarihana siantifika.Hitohy ny alakamisy izany amin’ny alalan’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, miaraka amin’ny minisitry ny Fitsarana. Hotohizan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, ny Filaminam-bahoaka ary ny eo anivon’ny Sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimariam-pirenena (Seg). Sambany ny fihaonana tahaka izao, atao amin’ny alalan’ny sary sy feo ampitain-davitra (visioconférence) na efa niady fo mafy ny hifanatrehana mivantana eny amin’ny CCI Ivato aza ireo depiote avy amin’ny mpanohitra. Anisan’ny tena hitrikitrihin’izy ireo manokana ny minisitry ny Toekarena sy ny vola. Tafiditra ao anatin’izany ny fitantanana ny vola niatrehana ny Covid-19, efa notakin’ny FFKM sy ny fiarahamonim-pirenena mangarahara koa. Manampy izany ny tsy hahatrarana ny fiakaran’ny harinkarena hatrany amin’ny 4% ho an’ity taona ity, tsy araka ny nambaran’ny minisitry ny Vola, tamin’ny taon-dasa, araka ny nambaran’ireo depiote mpanohitra hatrany.Araka izany, andrasana ny ho fizotran’izany amin’izao fomba fiasa izao sy ny ho fandehan’ny adihevitra.Synèse R. L’article Tatitry ny asan’ny governemanta: hifanatrika amin’ny « visioconférence » ireo depiote sy ny PM a été récupéré chez Newsmada.
Fanelanelanan’ny CFM: dimy ireo nahazo famotsoran-keloka noho ny krizy politika
Noporofoin’ny CFM fa miasa izy ireo. Nanterin’izy ireo koa anefa fa zava-dehibe ny fampihavanana, ankoatra ny famotsoran-keloka ho an’ireo voarohirohy noho ny krizy politika teto amin’ny firenena.Olona dimy avy eto amin’ny faritan’Antananarivo amin’ireo 20 nangataka izany no nahazo ny famotsoran-keloka, ny 11 desambra, teo araka ny nambaran’ny eo anivon’ny CFM, omaly. Voasaringotra noho ny krizy politika ho an’ny taona 2002 sy ny taona 2009 izy ireo, araka ny nambaran’ny filoha lefitry ny CFM, Ramamimampionona Gérard, tetsy Ampefiloha. “Andraikitray izany mba hanamafisana orina ny fihavanana ho lavitry ny disadisa. Tafiditra amin’ny fikendrena ny fampihavana ny firenena”, hoy izy. Nanteriny fa heloka noho ny antony politika izany.Nandalo dingana sy lalana sarotraNandalo dingana sy lalana sarotra anefa izany. Anisan’izany ny fanadihadiana sy ady hevitra teny anivon’ny fitsarana sy teo anivon’ny fivoriamben’ny CFM, vao nirosoana ny fanapahan-kevitra amin’ny famotsoran-keloka, araka ny nambarany. Nanambara kosa ny mpikamban’ny CFM misahana ny famotsoran-keloka fa tsy mijanona eo amin’ny fampihavanana fotsiny ihany izy ireo. “Mikendry ny firaisankina. Tsy maintsy mifamela heloka isika satria mety nisy ny fanenjehena tsy an-drariny nefa koa tsy misy anjely eto. Famotsoran-keloka ho an’ny fampihavanan ny an’ny CFM”, hoy ihany izy.Synèse R.L’article Fanelanelanan’ny CFM: dimy ireo nahazo famotsoran-keloka noho ny krizy politika a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fanomanan-tena: misongadina ny tanjaka sy ny fahaiza-miaraky ny Barea
Mizotra an-tsakany sy an-davany ny fanomanantenan’ny Barea de Madagascar. Taorian’ny lalao tsapa teo amin’ireo samy mpilalao, hita fa voarain’ireo mpilalao ny taktika nomena azy ireo tsirairay avy.Namaranana ny herinandro voalohany amin’ny fanazarantenan’ny Barea de Madagascar, ny lalao fitsapana teo amin’ireo samy mpilalao nantsoina. Fihaonana, notanterahina teny amin’ny kianja Ambohidratrimo, ny asabotsy lasa teo. 30 mn intelo miditra ny nanaovana ny tsapa ka nampifangaroana ireo mpilalao rehetra. Nisy ireo tsy niala mihitsy, toa an’i Berajo, Bapasy, Paulin, Lapoussin, Hakim, Njiva, El Hadary, Bance, Dax, Fabrice.Hita taratra fa hain’ireo mpilalao ny nampihatra ireo paikady nomena sy nampianarina azy ireo. Tsara rafitra ny vodilaharana ary mirindra ny fanamboarana ny fanafihana eo ampovoan’ny kianja, saingy tsy ampy kosa ny tifi-davitra eo amin’ireo lohalaharana. Ao anatin’ny tanjany tanteraka ihany koa ireo mpilalao. “Afa-po aho satria samy naneho ny fahaiza-manao tamin’ny zavatra nampitaina ireo mpilalao na teo aza ny havizanana vokatr’izany. Vita iny ka hiaraka hidinika amin’ireo mpiara-miasa amiko aho, ny amin’ny ho tombanezaky ny tsirairay”, hoy Rabesandratana Eric, mpanazatra.Tsiahivina fa tsy niatrika iny lalao tsapa iny i Carolus sy i Anicet.Tsapan’ny rehetra fa nisy fiovana ny Barea, na ny fihetsika sy ny fomba fitondran-tenan’ireo mpilalao teny ambony na tety ivelany, araka ny takin’ny mpanazatra. Raha tsy misy ny fiovana, horaisin’ny filoham-pirenena etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina ny Barea, rahampitso talata ary hiatrika lalao tsapa farany, amin’ny alarobia ka mbola andrasana izay ekipa mety hifanandrina amin’izy ireo, amin’izany. TompondakaL’article Kitra – Fanomanan-tena: misongadina ny tanjaka sy ny fahaiza-miaraky ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: 64 ny tranga vaovao tao anatin’ny 48 ora
Ho an’ny faran’ny herinandro, nahatratra 756 ny isan’ny fitiliana vita ka nahitana tranga vaovao 64, nisy olona valo lavon’ny valanaretina tao anatin’ny 48 ora. 49 kosa ireo sitrana soa aman-tsara, araka ny antontanisa nivoaka ofisialy. 97 ireo tranga misy fahasarotany hatramin’ny 12 jona teo. Ho an’ny tranga vaovao 39 voatily ny 12 jona, 17 tamin’ireo teto Analamanga avokoa. Mitohy ny fanentanana ny vahoaka mihoatra ny 18 taona noho miakatra hanatona ny toeram-panaovana baksiny akaiky azy. Hatreto aloha, malaina ny ankamaroan’ny mponina handray ny fatra voalohany, indrindra ireo mpiasan’ny fahasalamana nantenaina hisitraka voalohany izany. Fito ny toerana fanaovam-baksiny ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra.Araka izany, tsy mbola resy tanteraka ny aretina ka mila mitandrina hatrany ny rehetra ary entanina hanaraka an-tsakany sy an-davany ireo fepetra ara-pahasalamana tafiditra ao anatin’ny fepetra fiarovana ny fiparitahan’ny valanaretina. L’article Covid-19: 64 ny tranga vaovao tao anatin’ny 48 ora a été récupéré chez Newsmada.
Nicolas Dupuis : Fin du stage de recyclage licence A UEFA
« Je viens de terminer mon stage de recyclage », a publié l’ancien sélectionneur des Barea, en fin de semaine. Titulaire de la licence A UEFA, Nicolas Dupuis se doit de suivre un stage de recyclage tous les trois ans. « C’est une obligation jusqu’à l’âge de 60 ans. J’aurais encore deux recyclages à faire. Sans le diplôme d’entraîneur de football, je ne peux pas rester sur les bancs. Je n’aime pas parler de ça. Ça me gêne. C’est très intéressant de participer à ce stage avec des entraîneurs de haut niveau », a continué Dupuis. Il était aux côtés des entraîneurs en provenance du Sénégal, de Djibouti, de l’Algérie, du Luxembourg et de l’Angleterre. Le recyclage a duré cinq mois, organisé par la fédération française de football et de l’UEFA. Le technicien français possède encore le diplôme DESJEPS football sur la performance sportive. Mais avec la suspension de son contrat à la tête des Barea et sa nomination à la tête de l’Académie Nationale Sportive de Haut-Niveau, Nicolas Dupuis met entre parenthèses son statut d’entraîneur de football. Sitôt nommé à la tête de l’ANSHN, Nicolas Dupuis a effectué la visite du terrain où seront construits les locaux de cette structure devant préparer les futurs sportifs malgaches. « L’académie sera multisport et beaucoup d’entraîneurs malgaches vont travailler sur place », a-t-il déclaré. Titulaire du doctorat STAPS, DEA STAPS, selon ses dires, il a les diplômes les plus élevés pour diriger une structure, une fédération et une association. « Cette nomination n’est pas le fruit du hasard », a-t-il conclu. T.H L’article Nicolas Dupuis : Fin du stage de recyclage licence A UEFA est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nicolas Dupuis : Fin du stage de recyclage licence A UEFA a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mahazoarivo : Le PAM chez le Premier ministre
Le Premier ministre Christian Ntsay a reçu, hier matin, la délégation du Programme Alimentaire Mondial (PAM) conduite par David Beasley, et qui a vu la présence du ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. Le chef de délégation a fait savoir sa satisfaction concernant le partenariat avec les membres du gouvernement, notamment sur la lutte contre la Covid-19, les impacts des changements climatiques, mais surtout la descente dans le Sud du pays pour constater de visu la réalité. Il a également souligné que la priorité sera donnée, entre autres, à l’eau potable, à l’agriculture et à l’éducation. Recueillis par Dominique R L’article Mahazoarivo : Le PAM chez le Premier ministre est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Mahazoarivo : Le PAM chez le Premier ministre a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Jly Sahivelo Delphin: voatendry ho lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika
Tontosa omaly teny amin’ny Etamazaoron’ny Tafika eny Andohalo ny famindram-pitantanana ara-taratasy teo amin’ny lehiben’ny Etama­zao­ron’ny Tafika teo aloha, andeha hisotro ronono, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude sy ny lehiben’ny Etamazao­ron’ny Tafika vaovao, ny Jly Sahivelo Delphin. Voatendry nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny 18 jona 2021 teo ity manamboninahitra ambony hisahana ny fibaikoana eo anivon’ny Tafika Malagasy ity. Marihina fa nisahana ny fandrindrana ankapobeny ny tetikasa teo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ny lehiben’ny Etamazao­ron’ ny Tafika vaovao.Jean ClaudeL’article Jly Sahivelo Delphin: voatendry ho lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika a été récupéré chez Newsmada.